Mụ na Nwanne M Mechara Mata—Akụkọ Mere Eme | Linda na Sally Ong
Akụkọ Linda Ong na nwanne ya Sally kọrọ
Linda: Mgbe m dị afọ iri na abụọ, mama m gwara m na e nwere nwanne m nwaanyị m tọrọ a kpọnyere ndị ọzọ ka ha jiri ya mere nwa. M nọ na-eche ma ọ̀ dakwara ogbi ka mụnwa. Amaghịkwa m onye ọ bụ n’oge m na-eto.
Sally: Amaghị m na ọ bụghị ndị mụ na ha bi mụrụ m. Nwaanyị mụ na ya bi m chere na ọ bụ mama m na-akụ m ezigbo ihe. Ọ na-emekwa m ka m̀ bụ ohu. Nke a mere na obi anaghị adị m mma, owu na-amakwa m, tinyere na m dara ogbi. Ọ bụ mgbe ihe ndị a na-eme ka Ndịàmà Jehova bịara zie m ozi ọma, mụ na ha ebidokwa ịmụ Baịbụl. Mgbe nwaanyị ahụ mụ na ya bi matara, ọ pịara m belt, gbanweekwa ugodi ụzọ anyị. Nke a mere ka m tọ n’ime ụlọ. Mgbe m dị afọ iri abụọ, m si n’ụlọ gbapụ, Ndịàmà Jehova kpọbatara m n’ụlọ ha, mụ na ha ebiri. Ná mmalite afọ 2012, e mere m baptizim.
Linda: Mgbe m dị afọ iri abụọ, mụ na Ndịàmà Jehova malitere ịmụ Baịbụl. Ka oge na-aga, m bidoro ịga mgbakọ distrikti na Jakata. A na-asụgharịrị ndị ogbi gara mgbakọ na Jakata okwu ndị a na-ekwu. Ọ bụ na mgbakọ ahụ ka m hụrụ ọtụtụ ndị ogbi ibe m, ma Sally. Sally bụ Onyeàmà Jehova bi n’Ebe Ugwu Sumatra. Mgbe m hụrụ ya, m chọpụtara na mụ na ya yiri, ma o nweghị ihe m ji nke ahụ kpọrọ.
Sally: Mụ na Linda bịara ghọọ ezigbo enyi. Obi m nọkwa na-agwa m na mụ na ya yiri, ma m wepụrụ ya n’obi m.
Linda: N’ọnwa Ọgọst afọ 2012, n’ụbọchị bọtara ụbọchị m mere baptizim, agụụ ịhụ nwanne m nwaanyị ahụ m na-achọ achọ bịara gụsiwe m ike. M rịọrọ Jehova, sị: “Biko mee ka m hụ nwanne m nwaanyị n’ihi na m chọrọ ịgwa ya onye ị bụ.” Obere oge m kpechara ekpere a, onye ma nwanne m nwaanyị ahụ ziteere mama m ozi n’ekwentị. Ọ bụ ihe a bụ ihe mbụ merenụ tupu mụ amata na Sally bụ nwanne m.
Sally: Mgbe Linda gwara m na m bụ nwanne ya nwaanyị ọ na-achọ achọ, m banyere ụgbọelu ozugbo gaa Jakata ka mụ na ya hụ. Mgbe m pụtara n’ebe ndị na-eche nche n’ọdụ ụgbọelu nọ, m hụrụ Linda, hụ mama m na papa m, na nwanne m nwaanyị ọzọ tọrọ m ebe ha nọ na-eche m. Ahụ́ nọ na-ama m jijiji. Onye ọ bụla n’ime ha makụrụ m, susuo m ọnụ. Mama m ekweghị ahapụ m ahapụ. Anyị niile bewere ákwá. Mgbe papa m na mama m ji anya mmiri rịọ m ka m gbaghara ha maka ịkpọnye m onye ọzọ ka o were m mere nwa, anyị bekwuru ákwá ma makụọ ibe anyị ọzọ.
Linda: Ebe ọ bụ na otú e si zụọ m dị iche na otú e si zụọ Sally, anyị amụtala otú anyị ga-esi na-ebi n’udo n’agbanyeghị na àgwà anyị na otú anyị si eme ihe abụghị otu. Ma anyị hụrụ ibe anyị n’anya nke ukwuu.
Sally: Mụ na Linda bi ugbu a, anyị nọkwa n’otu ọgbakọ na-eji asụsụ ndị ogbi amụ ihe na Jakata.
Linda: E kegara mụ na Sally ruo ihe karịrị afọ iri abụọ. Ma anyị na-ekele Jehova na anyị mechara mata.